(သီလဝံသ၊ မဟာ သျှင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ထို့နောက် နတ်မီးလင်းဆရာတော်ထံတွင် ပါဠိစာပေ၊ ပိဋိကတ် ဓမ္မစာပေများကို ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်အောင် ဆက်လက်လေ့လာ ဆည်းပူးခဲ့သည်။ စာဆိုဗီဇ ထူးချွန်သော ရှင်သီလဝံသသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၅၃ခုနှစ် သက်တော် ၃၈ နှစ်တွင် နတ်မီးလင်းကျောင်း၌ပင် သီတင်းသုံးရင်း ပါရမီတော်ခန်း ပျို့ကဗျာကြီးကို အပြီးစပ်ဆိုသီကုံးခဲ့သည်။ ၎င်းပါရမီတော်ခန်း ပျို့ကဗျာကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ပါရမီတော် ၁၀ ပါးဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရပုံတို့ကို စပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပျို့ကဗျာ မည်ယုံမဟုတ်ဘဲ တရားသဘော အဓိပ္ပာယ်တို့ဖြင့် လေးနက်သိမ်မွေ့လွန်းသည်။ ပါရမီတော်ခန်းပျို့ကြီးရေးသားပြီးသောအခါတွင် ရှင်မဟာသီလဝံသ၏ ပညာမှာ စတင်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည်လည်း ကျမ်းစာတတ် ပညာရှိအကျော်အမော်များရှိရာ အင်းဝနပြေည်တော်သို့ ပြောင်းရွေ့ရန် ဆန္ဒရှိလာခဲ့သည်။
ခရီးထွက်ခဲ့ရာ ဦးစွာ ပင်းယမြို့သို့ရောက်ရှိပြီး ခေတ္တတည်းခိုသီတင်းသုံးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆက်လက်ခရီးဆက်ခဲ့ရာ အင်းဝမြို့တော်အနီး တံတားဦး အရပ်သို့ ချောမောစွာ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တံတားဦးသို့ ရောက်သောအခါ "တောင်တွင်းရှင်သီလဝံသမထေရ်သည် အင်းဝနေပြည်တော်သို့ ကြွလာတော်မူသည်" ဟု အင်းဝမြို့တွင်း သတင်းပျံ့နှံ့ကာ လူအများသည် ဆရာတော်ထံ လာရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ခေတ်ပြိုင်စာဆိုဖြစ်လာမည့် ရှင်ရဋ္ဌသာရသည်လည်း ဆရာဖြစ်သူ၏ တိုက်တွန်းချက်အရ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အင်းဝသို့ ရောက်ရှိ သီတင်းသုံးသောအခါ အသက် ၄၀ ခန့်ပင် ရှိပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၈၀ ခန့်တွင် နရပတိ ဘုရင်က တောင်းပြန်၍ ဓမ္မပါလပျို့ကို ရေးသားခဲ့ရာ ပြီးစီးအောင် စပ်ဆိုးခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ဘဲ ၁၇ ပုဒ်မျှ ရေးသားအပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၈၀ ပြည့်နှစ် သက်တော် ၆၅၊ ဝါတော် ၄၅ ဝါတွင် ပျံတော်မူခဲ့သည်။
ပျို့များအပြင် ရှင်မဟာသီလဝံသသည် မော်ကွန်းများကိုလည်း ရေးသားသေးသည်။ ရှင်မဟာသီလဝံသသည် သက္ကရာဇ် ၈၅၈ ခုနှစ် ဒုတိယမင်းခေါင် လက်ထက်တွင် တံတားဦးတည် မော်ကွန်းကို ဖွဲ့ဆိုသည်။ တံတားဦးရပ်တွင် ဒုတိယမင်းခေါင် တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသော မင်္ဂလာ စေတီတော်ကို ဖွဲ့ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ၁၂ ပိုဒ်မျှ ပြီးစီးသည့်ကာလ ထိုတံတားဦးတည် မော်ကွန်းကို ရှင်မဟာ ရဋ္ဌသာရ ရေးသားစီရင် ပြီးစီး ကြောင်း သိသောအခါ ဆက်လက်မရေးသားတော့ဘဲ ရေးပြီး ၁၂ ပိုဒ်ကို ချေဖျက်စေသည်တွင် တပည့်ရဟန်းများ က ကူးယူသိမ်းဆည်းထားကြလေသည်။ ယင်းမော်ကွန်းတွင် ရှင်မဟာသီလဝံသသည် ဒုတိယ မင်းခေါင်းအား ဗုဒ္ဓအလောင်းအလျာသဖွယ်ထား၍ သတ္တဝါတို့ကို ကယ်မတော်မူနိုင်သည့် ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်မည့် အကြောင်းကို ခမ်းနားနက်နဲသော စကား ဥပမာ ဥပစာတို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်ကာ ရေးသားဖွဲ့ဆိုထားလေသည်။ ဘုရားအဖြစ်ကို ရရှိဖို့ရာ ပါရမီတော်ကို ဖြည့်ကျင့်ရန် ကြံတော်မူမည့်အကြောင်း နှင့် ဆုတောင်းတော်မူသော အကြောင်းအရာများကို ကဗျာ့ကဝိကြီး ပီသစွာ ဥပစာတင်စား၍ သုံးပုံမှာလည်း လွန်စွာ ကောင်းမွန်လှသည် ဖြစ်ရကား ရှင်မဟာ သီလဝံသ၏ ကဗျာ့အာဘော်ကို မီအောင်ပင် နောက်ဆရာများ မလိုက်နိုင်ကြ ပေ။ ဤမော်ကွန်းအပြင် အခြား မော်ကွန်းတို့ကား မိတ္ထီလာ (သျှိသျှား) ကန်တော်ဘွဲ့မော်ကွန်း၊ ရွှေနန်းတည် မော်ကွန်းတို့ဖြစ်၏။
↑ လှသမိန် (၁၉၆၁ ခုနှစ်). ဂန္ထဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ်. ၃၅၇၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ဟံသာဝတီစာအုပ်တိုက်, ၄။
↑ ဘုန်းနွယ်(ရေစကြို)၊ အရှင်ဧသိက(ဘုန်းနွယ်). ရဟန်းစာဆိုတော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သျှင်မဟာ_သီလဝံသ&oldid=493610" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၇:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။